အထွေထွေရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်လက္ကား SND-M10 Synthetic Micron Diamond Powder မှဆေးကြောခြင်း SinoDiam
၁။ Micron Diamond Powder နိဒါန်း
SND-M10 သည်ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက်မိုက်ခရွန်စိန်အမှုန့်နှင့်အတူ Irregular crystal ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည် အတော်လေးအာရုံစိုက် အမှုန်အရွယ်အစားဖြန့်ဖြူး, အနိမ့်အရောအနှောပါဝင်မှု။ အမြင့် ထိရောက်မှု။ တွင်သုံးနိုင်သည် ဗဓေလသစ်
သတ္တုနှောင်ကြိုး vitrified နှင့် electroplated ထုတ်ကုန်။
၂. Micron Diamond Powder ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
SND-M05 0-0.125 ~ 40-60 SND-M10 0-0.125 ~ 40-60 SND-M15 0-0.125 ~ 40-60
မမှန် crystal ပုံသဏ္,ာန်,
ဗဓေလသစ်နှင့် vitrified နှောင်ကြိုး၌တည်၏။
နှင့်အတူ irregregular ကြည်လင်ပုံသဏ္.ာန်
ဗဓေလသစ်, သတ္တုနှောင်ကြိုး vitrified
နှင့် electroplated ထုတ်ကုန်။
3. Micron စိန်ရရှိနိုင် Grit အရွယ်အစား
နိုင်ငံတကာအဆင့် တရုတ်စံ ကွက်အရွယ်အစား လျှောက်လွှာ
၀.၀.၁ W0.1 100000 Super Mirror Polishing
0.0.25 W0.25 60000 Super Mirror Polishing
၀.၀.၅ W0.5 30000 ကြေးမုံ Polishing
0-1 W1 15000 ကြေးမုံ Polishing
၀.၂ W1.5- 13000 ဒဏ်ငွေပိုလန်
၁-၂ W1.5 12000 ဒဏ်ငွေပိုလန်
၁-၃ W2.5 10000 ဒဏ်ငွေပိုလန်
၂-၄ W3.5 6500 ဒဏ်ငွေပိုလန်
၂-၅ W4 5000 ဒဏ်ငွေပိုလန်
၃-၆ W5 4000 ဒဏ်ငွေပိုလန်
၄-၆ W6 3500 ဒဏ်ငွေပိုလန်
၄-၈ W7 3000 ပုံမှန် illustrating
4-9 W10 2500 ပုံမှန် illustrating
၅-၁၀ W10 2000 ပုံမှန် illustrating
6-12 W10 1800 ပုံမှန် illustrating
၈-၁၂ W12 1600 ပုံမှန် illustrating
7-14 W14 1500 ပုံမှန် illustrating
8-16 W14 1300 ပုံမှန် illustrating
၁၀-၂၀ W20- 1200 ပုံမှန် illustrating
၁၂-၂၂ W20 1000 ပုံမှန် illustrating
၁၅-၂၅ W20 + 800 ပုံမှန် illustrating
၂၀-၃၀ W28 700 ပုံမှန် illustrating
၂၂-၃၆ W28 + 600 ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်ခွဲ
၂၀-၄၀ W40- 500 ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်ခွဲ
30-40 W40 450 ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်ခွဲ
35-45 W40 + 400 ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်ခွဲ
၃၆-၅၄ W50 350 ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်ခွဲ
D46 325/400 320 ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်ခွဲ
D54 270/325 270 ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်ခွဲ
D64 230/270 230 ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်ခွဲ
D76 200/230 200 ကြမ်းတမ်းသောကြိတ်ခွဲ
50 / 60-325 / 400
ကျောက်တုံးများ၊ ကွန်ကရစ်များ၊ ကြွေထည်များစသည့်လုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။
30 / 35-325 / 400
အဝါရောင်အရောင်, စံခိုင်မာသောနှင့်အတူမမှန်ပုံသဏ္,ာန်, အတွက်အသုံးချ
ကြွေပြားကပ်ခြင်း၊ ဗဓေလသစ်ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသော electroplating
ထုတ်ကုန်များ၊ ကျောက်များ၊ သတ္တုစပ်၊ သံလိုက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်၊
အဝါရောင်အရောင်, မြင့်မားသောမာကြောခြင်းနှင့်ခိုင်မာခြင်း။ ကြွေထည်များတွင်အသုံးချ
နှောင်ကြိုး, ဗဓေလသစ်နှောင်ကြိုးနှင့် electroplating ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်နိုင်သည်
ကာဗိုက်၊ ဖန်၊ ကြွေထည်မြေထည်လုပ်ငန်းများတွင်သုံးသောအကြီးစားလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုသည်။
ကျောက်နှင့်အခြား Non- သတ္တုပစ္စည်းများ။
ရှေ့သို့ SND-G15 မြင့်မားသောခက်ခဲသောအဝါရောင် RVD ကြွေပြားစိန်အမှုန့်ကိုကျိန်ဆဲသည်
နောက်တစ်ခု: SND-M15 မြင့်မားသောခက်ခဲသောဒြပ်ပေါင်းမိုက်ကရွန်စိန်အမှုန့်ကြွေပြားကပ်ဆေး
SND-M15 မြင့်မားသောခက်ခဲသောဒြပ်ပေါင်းမိုက်ခရွန်စိန် ...
SND-M05 ကြွေပြားကပ်သော Synthetic Micron Dia polishing ...
SND-G10 အဝါရောင် RVD ကြမ်းတမ်းသောစိန်အမှုန့်အစေး ...
SND-G05 စိမ်းလန်းသော RVD စိမ်းလန်းသောကျောက်တန်း ...
SND-G15 မြင့်မားသောခက်ခဲသောအဝါရောင် RVD ကောက်သော Synth ...